တခြားကလေးအမေတွေလို မလှဘူးဆိုတဲ့ စကားအပေါ် တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ – XB Media Myanmar
ပရိသတျတှေ ခစြျကွတဲ့ အဆိုတောျ အသေငျခြိုဆှကေ single mother တဈယောကျအနနေဲ့ ဘဝကို ရဲရဲရငျ့ရငျ့ ဖွတျသနျးနတေဲ့ စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျတဲ့ အမြိုးသမီး တဈဦးပါပဲ။ အသေငျ့ကို ခစြျကွတဲ့ ပရိသတျတှကေလဲ အသေငျရဲ့ ဖွဈတညျမှုကို အားပေးလကျခံပွီ ခစြျခငျအားေ ပးကွ ဆဲပါပဲ။ ဒီနေ့မှာတော့ အသေငျခြိုဆှကေ ယဉျကြေးမှုမရှိတဲ့လူတဈယောကျရဲ့ အပွောအဆိုေ ကွာငျ့ တောျတောျလေး စိတျဆိုးနတောကို တှေ့ရပါတယျ။
အေသင်ချိုဆွေက “ကျွန်မက ‘ဝ’ တယ်လေ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ? ကျွန်မကရှင့်ခေါင်းပေါ်တက်ထို င်နေလို့လား? ဟုတ်တယ်…..🤬 သူများကလေးအမေတွေက အပျိုတောင်ရှုံးတယ် လှကြတာ” လို့ လာမယှဉ်နဲ့လေ။”
“အဲ့လိုယှဉ်ပြီး ပြောတာလောက်မုန်းတာမရှိဘူး။ လူတိုင်းမှာ သူ့တန်ဖိုးနဲ့ သူ ရှိပြီးသား။ ယှဉ်စရာကိုအကြောင်းမရှိဘူး။ စေတနာနဲ့လည်း မပြောနဲ့ ကိုယ်လည်းဘာမှလု ပ်ပေးတာမ ဟုတ်ပဲနဲ့။ (ပါးစပ်စေတနာက အပြောမတတ်ရင် ထမှီလှန်ပြသလိုပဲတဲ့နော်။ )”
“(ကျွန်မ နေရာကနေ တရက်လောက်လာနေကြည့်ပါလား( ရူးတောင်သွားမယ်) ) ကျွန်မ က သူတို့လို မလှတာနဲ့ သေပေးရမှာလား? ကျွန်မ က ကျွန်မပဲ။ ကျွန်မ ဘဝ နဲ့ ကျွန်မ။ ကျွန်မ ခံယူချက်နဲ့ ကျွန်မ။ ကျွန်မ အလှ နဲ့ ကျွန်မ။”
“ဒီနိုင်ငံမှာ “ဝ” တယ်ဆိုတာနဲ့ ကဲ့ရီစရာ စောက်ခွက်ပြောင်စရာကြီးကိုဖြစ်လို့။ အဲ့ဒီအစွဲတွေကို ချွတ်ပစ်မှာ မပူနဲ့။ ကွယ်ရာမှာ ပြောချင်ပြော $ဂရုမစိုက်ဘူး။ ဒဲ့တော့လာမပြောနဲ့ အာမ မခံ နိုင်ဘူး။” ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။
အေသင်ချိုဆွေလို သည်းခံနားလည်တတ်တဲ့လူတောင် အခုလို တော်တော်လေး စိတ်ဆိုးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို မိုမိုလေးမှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
Source: Athen Cho Swe’s fb,Reference&Credit:momolay.com
လွန်ခဲ့သော ၁၀နှစ်လောက်က သူ့ရဲ့ ပုံဟောင်းလေးတွေမျှဝေလိုက်တဲ့ အောင်ရေချမ်း